Sodàna: Bilaogera Mitantara Ny Famotorana Natao Azy Nandritra Ny Telo Andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2012 9:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, polski, Български, Italiano, Ελληνικά, English
Nosoritan’ ilay bilaogera Sodaney Maha Elsanosi mazava tsara ny famotorana natao azy izay naharitra telo andro tao amin'ny Sampan-draharaha nasionaly misahana ny Fitsikilovana sy ny Fiarovana (NISS), taorian'ny fisamborana azy tao Sodàna.
Tao amin'ny lahatsoratra izay tokony hovakiana, Maha, izay tsy iza fa mpanoratra Sodàna ato amin'ny Global Voices ihany, nitantara toy izao:
Nandritra ny fihazonana ahy voalohany, niaritra herisetra ara-tsaina adin'ny efatra aho. Hoy ilay mpanadihady niteny tamiko: “Mitazàna eo am-baravarakely, izao no fotoana farany ahitanao masoandro.” Ny iray hafa kosa nilaza tamiko fa hafindra any amin'ny fonjan'ny vehivavy aho ka tsy misy olona afaka mijery akaiky ny momba ahy. Mampiseho izany fa toy ny olon-doza aho amin'izy ireo.
Mpikambana ao amin'ny Girifna midika hoe “Leo izahay” i Maha, hetsi-panoherana milamina ivondronanan'ny mpianatra ambony ao amin'ny oniversite Sodàna. Araka ny filazan'ny vondrona, ny hanongana ny Antokon'ny fitondrana Kongresy Nasionaly ny tanjon'izy ireo, antoko izay mitondra an'i Sodàna, sy manantena hampandroso ny fomba fijeriny momba ny fandaharan'asa nasionaly, heveriny hitondra ny firenena any amin'ny fandrosoana. Azonao jerena eto ny kaonty Twitter-ny fikambanana, izay ampiasainy hanaparitahana vaovao momba ny revolisiona hoavy ao Sodàna.
Natomboka tao an-drenivohitra Sodaney, ao Khartoum ny fihetsiketsehana tamin'ny volana lasa, taorian'ny fanambaran'ny governemanta mikasika ny fanapahana ny fandaniana sasany sy ny fepetra hafa momba ny fitsitsiana. Tsy maba toy ny any amin’ny firenen-kafa, tsy mba voatantara amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ny fihetsiketsehana izay mbola mitohy androany.
Naharitra 11 ora kosa ny famotorana natao an'i Maha ny andro faharoa. Toy izao ny fitantarany:
Nampitahorina aho no sady norahonana, noesoesona ihany koa ary nanaovana herisetra ara-tsaina. Nalain'izy ireo ny solosaina finday taty amiko ary nilaza izy ireo fa hojereny ao ny sariko; ary ho ampiasany raha vao hitany fa manelingelina azy ireo aho. Nolazain’izy ireo koa aho fa vitany mora foana ny mampiala ahy amin’ny asako. Hoy kosa ny iray tamin’izy ireo: “Tsara avokoa ny sary ato anatin’ny findainao”. “Manana mpankafy marobe ianao,” hoy izy nanampy. Ilay lehilahy iray hafa kosa variana nikaroka sary tao anatin’ilay solosainako finday. Nahita ny sariko sy ny namako akaiky ahy nitsotsotra teo ambony fandriana izy. Avy eo nanontany izy raha lesbiana aho.
Adiny telo kosa ny faharetan'ny fanadihadiana natao azy ny andro fahatelo. Hoy i Maha namaly rehefa nanontaniana:
Nasain’izy ireo nanao sonia fanambarana mampanantena fa tsy handray anjara amin’ny hetsika karakarain’ny Girifna intsony aho, ka raha mbola mandray anjara, dia hoentina eo anatrehan’ny fitsarana ho manohintohina ny fandriampahalemana. Nasain’izy ireo nanao Sonia ilay fanambarana ihany koa ny raiko. Avy eo nomen’izy ireo ahy ny findaiko sy ny entako hafa, saingy nilaza kosa izy ireo fa hotazoniny ny solosainako roa hanaovana “fanadihadiana fanampiny”. Afaka naka ireo solosainako ihany anefa aho andro vitsy lasa izay
Nampatsiahy anay ihany koa I Maha hoe:
Anisan’ireo olona mbola notanana nanomboka herinandro maro i Boshi, izay nosamborina tamin’ny fiandohan’ity taona ity, anisan’izany ihany koa i Usamah Ali, olo-tsotra mpanao gazety sy mpisera Twitter malaza, ao koa ireo mpikambana ao amin’ny Girifna Mohamed Izzelden sy Rashida Shamseldin ary ny sisa maro hafa. Samy mety efa tratran’ny herisetra ara-tsaina avokoa izy ireo. Nataon’izy ireo sorona ny fahalalahany ho famonjena an’i Sodàna mba ho afaka.
Efa noafahana ihany koa I Mohamed Izzelden